Itoobiya oo bilowday wejiga 2aad ee buuxinta biyo xireenka Nile, taasoo ka careysiisay Masar. – Radio Daljir
Luulyo 7, 2021 9:13 b 0
Ethiopia ayaa sheegtay inay bilowday wajiga xiga ee buuxinta biyo xireenka weyn ee muranka badan dhaliyay ee webiga Nile, masuuliyiinta masar ayaa sidaas sheegay maanta oo isniin ah, taasoo sare u qaadeysa xiisada inta laga sugayo Golaha amaanka ee qaramada midoobay oo arintaan ku saabsan.
Masar ayaa sheegtay in talaabadani ay ahayd “ku xadgudub sharciyada caalamiga ah iyo heerarka nidaaminaya mashaariicda lagu dhisay wabiyada ay wadaagaan wabiyada caalamiga ah,” waxayna muujisay “inay si adag u diidayso talaabadan hal dhinac ah,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaarada waraabka. bayaan.
Biyo-xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam, oo markii la dhammeeyo noqda mashruucii ugu weynaa ee laga hirgeliyo qaaradda Afrika, ayaa ah isha ay ka taagan tahay dib-u-heshiisiin diblomaasiyadeed oo muddo toban sano ku dhow u dhexeysa Addis Ababa iyo waddamada hoose ee Masar iyo Suudaan.
Itoobiya ayaa sheegtay in mashruucani muhiim u yahay horumarintiisa, laakiin Qaahira iyo Khartuum ayaa ka cabsi qaba inuu xadido helitaanka biyaha muwaadiniintooda.
Labada dalba waxay Addis Ababa ku cadaadiyeen inay gaarto heshiis qasab ah oo ku saabsan buuxinta iyo ka shaqeynta biyo xireenka, waxayna todobaadyadii la soo dhaafay ku boorinayeen Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay arintaas wax ka qabtaan.
Shirka Khamiista waxaa codsaday Tunisia iyadoo wakiil ka ah Masar iyo Suudaan, ilo diblomaasiyadeed ayaa u sheegay AFP.
Laakiin safiirka Faransiiska ee UN-ka ayaa usbuucii la soo dhaafay sheegay in golaha laftiisu wax yar qaban karo marka laga reebo isku soo dhaweynta dhinacyada.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Masar Sameh Shoukry ayaa qoraal uu u diray UN-ka ku sheegay in wadahadaladu meel xun marayaan wuxuuna Ethiopia ku eedeeyay inay qaadatay “siyaasad kacsan oo wiiqaysa dadaalkeena wadajirka ah ee heshiis lagu gaadhayay”.
Addis Ababa waxay horey u shaacisay inay u gudbi doonto wajiga labaad ee dib u buuxinta bisha July, heshiis ama heshiis la’aan.
Niilka, waa mid ka mid ah wabiyada ugu dheer adduunka oo dhan illaa 6,000 oo kiilomitir, waa isha ugu muhiimsan ee biyo iyo koronto ay u helaan daraasiin dal oo dhaca Bariga Afrika.
Masar, oo ku tiirsan wabiga Niil qiyaastii boqolkiiba 97 waraabkeeda iyo cabitaankeeda, waxay u aragtaa biyo xireenka inuu yahay khatar jirta.
Suudaan waxay rajeyneysaa in mashruucu maareyn doono daadadka sanadlaha ah, laakiin waxay ka cabsi qabtaa in biyo xireennada ay waxyeelloobaan haddii aan heshiis laga gaarin howlgalka Itoobiya.
Biyo-xireenka oo dhererkiisu yahay 145-mitir (475-cagood), oo dhismihiisa la bilaabay 2011-kii, wuxuu qaadi karaa 74 bilyan oo mitir kuyuubik.
Buuxinta ayaa bilaabatay sanadkii hore, markii ay Itoobiya shaacisay bishii Luulyo 2020 inay gaadhay hadafkeedii ahaa 4.9 bilyan oo mitir kuyuubik – oo ku filan in lagu tijaabiyo labada marawaxadood ee ugu horreeya biyo-xidheenka, waa guul weyn oo loo gaadhay wadada si dhab ahaantii loo soo saaro tamar.
Hadafku waa in la qabsado 13.5 bilyan oo mitir cubic oo dheeri ah sanadkan.
Masar iyo Suudaan waxay doonayeen in heshiis saddex-geesood ah laga gaadho hawlaha biyo-xidheenka ka hor inta aan la buuxin biyo-xidheenka.
Laakiin Itoobiya ayaa sheegtay inay tahay qayb dabiici ah oo ka mid ah dhismaha sidaas darteedna aan dib loo dhigi karin.
Sannadkii hore, Suudaan waxay sheegtay in geeddi-socodka uu sababay biyo la’aan, oo ay ku jirto caasimadda Khartuum, sheegashadaas oo Itoobiya ay ku muransan tahay
Wasiirka biyaha ee Suudaan, Yasser Abbas, ayaa ka digay bishii Abriil in haddii Itoobiya ay ku dhaqaaqdo wejiga labaad ee buuxinta, Suudaan “ay keenayso dacwado ka dhan ah shirkadda Talyaaniga ah ee dhisaysa biyo-xidheenka iyo dawladda Itoobiya”.
Wuxuu sheegay in dacwadaha ay xoojinayaan in “saameynta deegaanka iyo bulshada iyo halista biyo xireenka” aan si ku filan loo tixgelin.
Guddiga Ilaalada deegaanka Burtinle oo Daljir la hadlay (daawo)